Ste Cecile du Vallon parish: Xoghaynta waxaa u dhinta shaqsi ... - WAA KU SAMEE
ACCUEIL » COMPANY »Ste Cecile du Vallon parish: Xog hayaha waxaa u dhintey shaqsi ...
Ste Cecile du Vallon parish: Xoghaynta ayaa u dhimatay shaqsi ...
Tani waa wada baabba'aan tan iyo aroortii Sabtida 10 Agoosto ee la soo dhaafay kaniisadda Sainte Cécile des Deux-Plateaux Vallon. Sababtoo ah Xoghayaha wadaaddada, Mrs. Faustine Brou waxay heshay booqashadii lama filaanka ahayd ee tuug.
Gacankudhiigluhu wuxuu geli lahaa oo ka tegi lahaa meeshan cibaadada isagoo qarsoon ka dib falkiisii ​​dambiilenimo. Dhab ahaantii waxaa loo qaatay nin kaniisad ah oo u yimid inuu tukado, wuxuu weeraray xoghayihii wuuna baxay asaga oo aan ogayn waardiyayaashu.
Sidoo kale akhri: Dhacdadii DJ Arafat: Didier Drogba wuxuu warka ka qaataa Daishikan
Waxay ahayd kadib bixitaankii dambe in haweeneydii saboolka ahayd laga dhex helay meel jiif ah oo dhiig ah, faraheeda ayaa go'ay 11hours maalintaas. Waxaa loola cararay isbitaal u dhawaa mana ku dhicikarto dhaawacyadeeda.
Sidoo kale akhri: Riwaayadda Kiff lama garaacdo: Shado Chris oo ay ku jirto durdurro wanaagsan shanta yeey ee masraxa masraxa taagan
Lahaanshaha marag la'aan intii uu socday weerarka, baaris ayaa loo furay si loo helo dambiilaha oo loo iftiimiyo laambadaha wax walba oo runtii dhacay subaxnimadii Sabtidan 10 Agoosto 2019, xafiiska xafiiska dabka "Tata Faustine.
Dhibaatadan daba socota Ste Cécile, waxaa la soo jeediyay in la adkeeyo amniga meelaha cibaadada iyo salaadda lagu tukado.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/societe/faits-divers/faits-divers-paroisse-ste-cecile-du-vallon-la-secretaire-meurt-tailladee-par-un-individu
Howlaha nadiifka ah ee magaalada oo leh Orange waa la bilaabay
"Dhimashada DJ ARAFAT waa wax laga xumaado"
Gamescom 2019: 4 Sims waxay diiradda saari doontaa sixirka iyadoo leh DLC cusub